Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya eToronto ukuya eOrlando eSwoop ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuvulwa kwenqwelomoya ukusuka eToronto Pearson kwisikhululo seenqwelomoya samanye amazwe kuphawula isiganeko esibalulekileyo senqwelomoya yaseCanada engabizi kakhulu njengoko ikhula kwinethiwekhi yaseMelika.
Ukuphehlelelwa kwanamhlanje kukhanyise iindlela zokuqala ezine ezingamisiyo kwisikhululo senqwelomoya saseOrlando Sanford ngenqwelomoya enexabiso eliphantsi.
Inkonzo yokuvula inqwelo moya enexabiso eliphantsi yexabiso isuke kwisikhululo senqwelomoya saseToronto Pearson ngo-8: 00 kusasa nge-EST kwaye yafika ngokukhuselekileyo nge-11: 00 kusasa ngexesha lendawo.
I-Swoop ikumishini yokwenza ukuba uhambo lufikeleleke ngakumbi kwaye lufikeleleke kubo bonke abantu baseCanada.
Namhlanje, uSwoop ubhiyozele uhambo lwayo lokuqala lokuya Isikhululo senqwelomoya saseOrlando Sanford. Inkonzo yokuvula inqwelo moya enexabiso eliphantsi yexabiso isuke kwisikhululo senqwelomoya saseToronto Pearson ngo-8: 00 kusasa nge-EST kwaye yafika ngokukhuselekileyo nge-11: 00 kusasa ngexesha lendawo.
“Siyavuya ngokwandisa uthungelwano lwethu lwase-US ngokusungulwa kwenqwelomoya yanamhlanje yokuqala Isikhululo senqwelomoya saseOrlando SanfordUtshilo uShane Workman, iNtloko yezeNdiza, Swoop. "Siyazi ukuba abantu baseKhanada banomdla wokuya emazantsi ukuya eFlorida enelanga ngeli xesha lobusika kunye nokufumaneka lula kwesikhululo senqwelomoya saseOrlando Sanford, ukufikelela kunye nokusondela kwezi ndawo zikufutshane kuyenza ibe sesango elifanelekileyo kulo mmandla."
Ukuphehlelelwa kwanamhlanje kukhabale iindlela zokuqala ezine ezingamisiyo ukuya Isikhululo senqwelomoya saseOrlando Sanford yenqwelomoya enexabiso eliphantsi. Kwiinyanga ezizayo, SwoopInkonzo eyongezelelweyo engapheliyo kwiOrlando Sanford imiselwe ukuqala eHamilton, ON, Winnipeg, MB naseEdmonton, AB.
Iinkcukacha zenkonzo kaSwoop eOrlando Sanford
Umzila Umhla wokuQalwa wokuCwangciswa Ukuphindaphindwa kweveki ngeeveki
I-Toronto (YYZ) -I-Orlando Sanford (SFB) Oktobha 9, 2021 3x ngeveki
IHamilton (YHM) -I-Orlando Sanford (SFB) Novemba 1, 2021 2x ngeveki
I-Edmonton (YEG) -I-Orlando Sanford (SFB) Disemba 3, 2021 2x ngeveki
IWinnipeg (YWG) -I-Orlando Sanford (SFB) Disemba 10, 2021 2x ngeveki
Swoop Ngumthuthi wexabiso eliphantsi waseCanada ophethwe yiWestJet. Kwabhengezwa ngokusesikweni nge-27 kaSeptemba, 2017, kwaye yaqala inqwelomoya ngoJuni 20, 2018. I-airline isekwe eCalgary kwaye yathiywa ngegama lomnqweno weWestJet "wokungena" kwimakethi yaseCanada ngemodeli entsha yeshishini.